द्वीप देशहरूमा - शानदार छुट्टी सबै राउन्ड वर्ष
बल्ल लामो प्रतीक्षा वसन्त आए। पहिले नै दुष्ट चिसो डराएका हुन र सूर्य को कोमल रेज मुस्कान सक्दैन। तथापि, पनि coldest दिन मा, तपाईं साँच्चै न्यानो दिन कतै तट मा आनन्द उठाउन सक्छौं।
हाल प्राप्त द्वीप देश को विशाल लोकप्रियता को समुद्रहरू, समुद्र र स्ट्रेट्स को फिरोजा पानी सबै पक्षलाई घेरे। तिनीहरूलाई को भन्दा वर्षैभरि स्थिर, नम्र गर्न तातो मौसम को घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यो कारक यात्री लागि पर्यटकहरु संग रिसोर्टमा छान्ने एक प्रमुख प्रभाव छ।
उत्कृष्ट द्वीप देशहरूमा, जो को समुद्री डाकू पानी मा झूठ क्यारेबियन सागर, सबै वर्ष दौर आफ्नो शोभा र प्राकृतिक अनुरूप यात्री ठूलो शहर को grayness र dampness मा languishing टुक्रा दान गर्न खुसी छन्। यी देशहरूमा क्युबा, बार्बाडोस, जमाइका समावेश बहामास, एन्टिगुवा, बार्बुडा र अन्य। आश्चर्यजनक प्रकृति, पशु र वनस्पति विविधता यी रिसोर्ट्स प्रत्येक मा प्रतिनिधित्व, ठूलो रोमान्टिक वातावरण र सूर्य, समुद्रको स्पष्ट पानी प्रतिबिम्बित - अरू के सिद्ध र स्मरणीय छुट्टी लागि आवश्यक छ?
द्वीप देशहरूमा, जो साइप्रस र समावेश माल्दिभ्स, सबै स्वाद को लागि एक महान छुट्टी रमाइलो गर्न अनुमति दिन्छ। र यी रिसोर्ट्स केवल एक सिद्धान्त द्वारा प्रत्येक अन्य समान छन् - तिनीहरूले वर्ष को कुनै पनि समय आराम लागि उत्कृष्ट छन्। मतभेद को विशाल संख्या बाँकी तिनीहरूलाई बीच अवस्थित। द्वीप मा हिउँदमा स्किइङ र स्नोबोर्डिङ प्रशस्त हुन सक्छ - साइप्रस आगंतुकों सुनको वा कालो ज्वालामुखी बालुवामा मात्र अल्छी मजा प्रदान गर्दछ। माल्दिभ्स - भारतीय महासागर को atolls - lagoons भण्डार प्रत्येक द्वीप द्वीपसमूह मसालेदार पानी को सौन्दर्य आनन्द लिई एक अविस्मरणीय छुट्टी खर्च गर्न चाहने ती लागि उत्कृष्ट छन्।
द्वीप देशहरूमा 45 भन्दा बढी देशहरूमा शामिल। यी को, सबै भन्दा ठूलो संख्या ओशिनिया र एशिया मा केंद्रित छ। सबै भन्दा प्रसिद्ध यस्तो फिजी, ताइवान रूपमा रिसोर्ट्स र साइप्रस र माल्दिभ्स माथि पहिले नै उल्लेख छन्। यी देशहरूमा यात्री जाडो न गर्मी न निराश छैन।
फिजी - द्वीपसमूह, जसको नाम, उज्ज्वल रसदार र पाकेको फल, रस म्याद सकिदैछ सम्झन्छन्। सबैभन्दा रोचक यस्तो मीठो नाम अन्तर्गत तीव्र विगतका cannibalistic लुकाउँछ छ। कि को परिणाम आफ्नो स्थानीय असभ्य जाति द्वारा खाएको थियो किनभने यहाँ पनि गल्ति अलमलिएको जहाज यात्रु disembark मानिसहरू डराउँदैनन्।
आफ्नो अप्रिय विगतमा लागि amends बनाउन प्रयास भने, फिजी, धेरै अन्य द्वीप देशहरूमा जस्तै, यो शान्ति र सान्त्वना शरण को दुनिया, यात्री भेटी एक अद्भुत छुट्टी छ अब। यहाँ प्रवाहको रूपमा, सबै Serenity र आश्चर्यजनक मौन को दुनिया प्रेमीहरूको देखि आते छन्।
युरोप को द्वीप देशहरूमा सबै पाँच राज्य अमेरिका मा प्रतिनिधित्व, तर उनीहरूको नाम सबैलाई ज्ञात छन् - संयुक्त राज्य, आइसल्याण्ड, आयरल्याण्ड, माल्टा र डेनमार्क। पाप यी शक्तिहरु हुन् भनेर पर्यटक एक विशाल संख्या भेला को एक स्थान, छैन संस्कृति, परम्परा र इतिहास रूपमा धेरै भौगोलिक स्थान, आकर्षित स्वीकार गर्दैन।
खोप कैन्यन आदर्श, असामान्यताहरु
प्लास्टिक Windows "मोन्ट ब्लन्क": समीक्षा। विन्डोज "मोन्ट ब्लन्क": मूल्यहरु
उहाँले गाडे Krug Mihail। एक तारा गीत को जीवन र मृत्युको बारेमा जानकारी
निर्वाचन व्यवहार: सक्रिय नागरिक हुन!
अवधारणा - एक अवधारणा धेरै-पक्षीय
रक्सी "Remy मार्टिन" - परम्परा को inviolability र उत्कृष्टता गर्न प्रतिबद्धता